Ukujonga kuqala kwe-Android 12: olona hlaziyo lunomdla kwiminyaka
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Ukujonga kuqala kwe-Android 12: Olona hlaziyo lunika umdla kwiminyaka
Ukujonga kuqala kwe-Android 12: Olona hlaziyo lunika umdla kwiminyaka
Hayi, uyenza njani inkqubo yokusebenza evuthiweyo ibe ntsha kwaye inomdla kwakhona? Buza kuGoogle, njengoko i-Android 12 ifezekisa oko. Kutyhilwe ngokusesikweni kwiintsuku nje ezidlulileyo, i-Android 12 isibetha ngokubonakalayo okuhlaziyiweyo okunika inkqubo yokusebenza iitoni zomlinganiswa ofunekayo. Ngaphandle kwengubo entsha yepeyinti efafazwe kulo lonke ujongano kunye neemenyu ezahlukeneyo, zininzi izinto zokuphucula umgangatho wobomi kunye nokusebenza okucingelwayo kunye nokuphuculwa kwemfihlo kunye nokhuseleko. Owu, kunye nokusebenza kuphuculwe kakhulu ngenxa yolunye ulungelelwaniso phantsi kwe-hood.
Ukuziphendulela: Uninzi lwezinto ezintsha ezibonakalisiweyo kwinqanaba le-aren & apos; azihlali kubeta yonjiniyela wamva nje kwaye ziya kufika kunye nokukhutshwa kwe-beta elandelayo. Ngenxa yobufutshane, siye sakhetha ukuzikhankanya kolu vavanyo.
Umhla wokukhutshwa kwe-Android 12
I-Android 12 izakufika kamva kulo nyaka, kodwa i-beta yokuqala yoluntu ilungile kwikona. Ngapha koko, abasebenzisi abanomdla abaziva ngathi banika i-Android 12 kunye neeapos ezintsha zokubonisa ispin sinokuzikhuphela ukuqala namhlanje. I-beta iyafumaneka kuGoogle & aposs zayo iiPixels kunye ne-trove yezinye izixhobo ezivela kwi-ASUS, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, TCL, vivo, Xiaomi, kunye ne-ZTE. Ungabona ukuba isixhobo sakho kufanelekile ngokulandela ikhonkco elingezantsi. UGoogle utyhile ixesha elilandelayo lokukhutshwa kwe-beta elandelayo kunye nozinzo olulindelekileyo lweqonga lohlaziyo lwesoftware, ekufuneka ifezekiswe ngasekupheleni kwehlobo. Ngeli xesha silindele ukuba i-Android 12 ikhutshelwe kulungelelwaniso lwePixel.
Fumana i-Android 12 beta kwisixhobo sakho
I-Android 12 Ukuvela ngokubanzi
Ukusukela kwixesha lam elifutshane kunye ne-beta yamva nje, kusekutsha kakhulu ukufikelela kwisigqibo njengoko uninzi lwezinto ezintsha ezinomdla zilahlekile ngokudabukisayo. Nangona kunjalo umxholo woyilo olutsha ulapho. Uninzi lokuphuculwa kunye nokusebenza okutsha okutsha kuya kufika kamva, kodwa inqaku langoku liseta umfanekiso onomdla- uhlaziyo olunomdla lwe-Android olugqitha phantse kuwo onke amava. Kuyavunywa, akukho & apos akukho siqinisekiso sokuba lonke olu tshintsho luya kwenziwa kuzo zonke izixhobo ezihambelanayo ze-Android ezili-12 ezantsi komgca; akukho sitsho ukuba utshintsho olubonakalayo, umzekelo, luya kuhlonitshwa yiSamsung okanye i-OnePlus, kodwa inye into & apos; ezithile zabasebenzisi bePixel bakunyango. Ngokuqinisekileyo akukho nto igqibelele, kwaye ngokuqinisekileyo kukho izinto endingazithandiyo, njengemenyu yoSeto lwabantwana, kodwa kuya kufuneka uthathe okuhle kunye nokubi.
Uyilo lwe-12 ye-Android: Izinto onazo
Uyilo ngokungathandabuzekiyo yeyona nto intsha inomdla kunye ne-Android 12, kwaye ulwimi olutsha loyilo luthwala i-oh-so-sweet 'Material You' moniker. Iimbonakalo ezintsha zomdibaniso ziyadlala kwaye zinamandla, zizisa uhlaziyo olufunekayo kwinkangeleko yenkqubo yokusebenza. Kukho ulawulo olugubungela yonke imvelaphi emhlophe, inemibala eqaqambileyo, imvelaphi ye-pastel eyenza isicatshulwa, ii-icon, kunye nomxholo osesikrinini uphume ngelixa kwangaxeshanye ukongeza umbala obonakalayo ofunekayo kumbala ujongano lonke. Iphalethi yombala iya kutshintsha ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwiphepha lodonga olicwangcisele amava abonakalayo. Ngelishwa, eli nqaku alinikwanga amandla kwi-beta esiza kudlala ngayo, kodwa nangona kunjalo, iya kuba lutshintsho olufunekayo kwinkqubo yokusebenza.
I-Android 12 yezixhobo Uyila ulwimi
Ngombulelo wenqaku elibizwa ngokuba yi-Colour extraction, i-Android iya kugqiba ngokuzenzekelayo ukuba yeyiphi imibala ebalaseleyo kwaye yeyiphi ehambelana nayo, ukupeyinta ngaphezulu komthunzi wesaziso, ukuvala isikrini, ulawulo lwevolumu entsha, iiwijethi ezintsha nokunye okuninzi. Kodwa umbala ayisiyiyo yonke into. UGoogle uphinde watshiza iitoni zoopopayi abatsha abagudileyo esivusa imvakalelo yokuhambelana kobushushu kulo lonke ujongano. Andinakulinda ukuzama eli nqaku, kodwa uGoogle akakayiphumezi kwi-beta yexesha elizayo.
Ngaphandle kombala kunye nokuhamba, ujongano ngokwalo lutshintshiwe kakhulu. Kwelinye, ipaneli yeZicwangciso eziKhawulezayo ikwacwangcisiwe: isilayida sokukhanya ngoku sihleli phezulu emthunzini wesaziso kwaye sinenkalipho enkulu kwaye sikhulu kunangaphambili. Iithayile ezikhawulezayo zokusetha ngoku zine nje xa umthunzi wesaziso ungekho ngokupheleleyo, usenza imbonakalo ecocekileyo. Swayiphela ezantsi kwakhona kwaye ezinye iithayile ezine ezibalulekileyo ziya kukubulisa. Ewe, iwijethi yomculo edlalayo ngoku isekhona xa kufuneka, ikunika ukufikelela ngokulula kumculo wakho okanye iipodcast. Ulawulo lukaGoogle kunye nokuLawulwa kweKhaya kukwababini abalulekileyo abafikayo kwindawo yokwazisa.
Izaziso ngokwazo ngoku ziyavela ngaphezulu kwemvelaphi ye-opaque kunye nokuqokelela kunye xa kuvakala. Ngeekona ezijikeleze ngakumbi kunye nokuhlangana okungabonakaliyo, izaziso zibonakala zicoceke ngakumbi kunangaphambili kwaye ngoku ziyinxalenye ebalulekileyo yomthunzi wesaziso kwaye ayisiyonto nje enamathela okwexeshana. Izaziso ezivela kwii -apps zengxoxo zisabonakala njengeencoko, ezikuvumela ukuba uqhubeke ngokulula nengxoxo ngaphandle kokuvula i-app yokuthumela imiyalezo.
Imenyu yezicwangciso ikwazile ukufumana enye i-revamp ebonakalayo, nangona ngokuqinisekileyo ndinokuthandabuza malunga nale njengoko ikhangeleka kwaye ivakala ngathi inyathelo elibuyela umva. Kwelinye, imenyu emitsha yoSeto ijongeka icocekile, kodwa ukujonga kwangaphambili kolwazi oluchithakele phantsi kweendidi ezininzi ngoku sele kulusizi. Kwiinguqulelo zangaphambili ze-Android, ungabona ngokuthe ngqo ukuba ubunokugcina okungakanani, okanye inqanaba lebhetri langoku liya kukuhlala ixesha elingakanani, kodwa i-Android 12 ibuyela umva kulwazi olongezelelekileyo ukuze ibonakale icocekile, ndiyaqikelela, ngalo lonke ixesha iluncedo oluncinci kunangaphambili .
Uhlaziyo: I-Android 12 beta 2 isizisele i-toggles ezijolise kubucala ezazilahlekile kwi-beta 1.
I-Android 12 vs Android 10 imenyu yokuseta
UGoogle kunye neqela leSamsung banikezela ngamava achazwe ngokutsha e-smartwatch
Iimephu zikaGoogle zifumana amanqaku amatsha kwi-I / O 2021
Iifoto zikaGoogle zihlaziywa ngeFolder Locker
I-Android 12 yabucala kunye noKhuseleko
UGoogle ujolise kukhuseleko kunye nemfihlo kakhulu ngexesha lokuvula iGoogle I / O ephambili. Kukho izikhombisi ezintsha zabucala ezifana ne-iOS kwikona ephezulu ngasekunene eya kuthi ibonakalise ngokucacileyo ukuba ikhamera yakho okanye imakrofoni zisetyenziswa ngokukuko yi-app ethile. Ukuthinta ezi icon kuya kukuxelela ngokuthe ngqo ukuba zeziphi ii -apps ezisebenzisa imakrofoni kunye nekhamera kwifowuni yakho. Iithayile ezimbini ezitsha kuseto olukhawulezayo ziya kuvumela umsebenzisi ukuba avale nokuba yeyiphi na imakrofoni, ikhamera, okanye zombini ekubeni zingene kwinkqubo iyonke, ekufuneka izise uxolo lwengqondo lokuphumla kubantu abaziqonda ngasese. Akukho phawu lweli nqaku kwi-beta yamva nje.
Enye into eyimfihlo eyimfihlo kukudashboard entsha yabucala, ekubonisayo ngokulula ukuba yeyiphi idatha efikelelweyo, kaninzi kangakanani kwaye zeziphi iiapps. Unokurhoxisa ngokulula imvume yeapps ngqo kwideshibhodi ukuze wazi ukuba yintoni eyenzekayo nefowuni yakho ngobulumko babucala kunye nesoftware engaziphathi kakuhle.
Ukufikelela kwendawo kuye kwahlaziywa kwakhona. Abasebenzisi baya kunikwa ukhetho lokunika ii -apps indawo echanekileyo okanye indawo ekuyo xa becelwa imvume yendawo. I-Prompt ayibonakali kwi-beta ekhoyo ngoku, kodwa ukuba uya kwiphepha lolwazi lohlelo lokusebenza olunikezelweyo kuyo nayiphi na insiza, unokuyikhanyela indawo echanekileyo.
Okokugqibela, kukho ii-apos ezintsha ze-Android yabucala yeKhompyuter yabucala. Eli nqaku lenza uGoogle enze imisebenzi eyahlukeneyo kwisixhobo uqobo kwaye axhomekeke nakancinci kwilifu. Umzekelo, i-Live Caption, ngoku UkuDlala kunye neMpendulo eyiSmart zonke ziya kwenzeka kwifowuni yakho kwaye awuzukufikelela kuGoogle nakwizandla zoncedo.
Ukusebenza kwe-Android 12
Ewe, uGoogle ukwenzile kwakhona. Unyaka nonyaka i-Android iyakhawuleza kwaye isebenze ngakumbi, kwaye ubheja i-Android 12 eyahlukileyo. Enkosi ngokuphuculwa kwe-hood entsonkothileyo eyenze ukuba i-Android i-12 ikhawuleze kwaye iphendule ngokusebenza kakuhle kwamandla ngaphezulu koko xa ithelekiswa ne-Android 11. I-Google ikufezekise njani oku? Ngaphandle kokonga i-ding yezobuchwephesha, uGoogle uya kwiinkcukacha ezintle malunga nenkqubela phambili ekusebenzeni nasekusebenzeni kakuhle. Umzekelo, uGoogle uthi ixesha le-CPU elifunekayo kwiinkonzo zenkqubo yesiseko liye lancitshiswa ukuya kuthi ga kwi-22% ngelixa kwangaxeshanye kunciphisa ukusetyenziswa kwe-CPU enkulu ngumncedisi wenkqubo ukuya kuthi ga kwi-15%. Ezi ziinzuzo ezintle eziza kuvelisa ubomi obungcono bebhetri ekuhambeni kwexesha.
Ukuya kuthi ga ngoku malunga ne-beta yamva nje, ibaleka ngokubalaseleyo kuzo zombini i-Pixel 4 XL kunye nePixel 5. Ii -apps zilayisha ngokukhawuleza kwaye yonke inkqubo iyaziva ilula. Yazi ukuba i-beta asinikezeli nge-spin kwaye ayizalisekiswa nangayiphi na indlela, ke izinto zinokutshintsha kakuhle xa zikhutshwa kwixesha elizayo.
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, kukho umgangatho osemtsha ophunyezwe kwi-Android 12 ebizwa ngokuba yiKlasi yokuSebenza, enceda ekuchongeni izixhobo zokusebenza eziphezulu kunye nokuqinisekisa ukuba izinto ezifunwayo kunye nokusebenza kuya kusebenza njengoko bekucwangcisiwe. Izixhobo zeklasi yokuSebenza kuya kufuneka zigubungele imigangatho ethile yesantya, njengokuqalisa kwekhamera, ukubakho kwekhowudi kunye nomgangatho wokukhowuda, kunye nobungakanani bememori obuncinci, isisombululo sescreen kunye nokusebenza kokufunda / ukubhala.
Ukukhusela isikrini kwi-iphone 12 pro max
galaxy tab 4 7.0 ukuphononongwa
Ungayiguqula njani imowudi emnyama kwiChannel ye-Android
I-iPhone Gmail yokutyhala izaziso ayisebenzi? Nazi iiapos zendlela yokulungisa loo nto
Ngoku ungayicima imozulu kwi-Glance widget kwiPixel Launcher
I-Beacon yimpendulo ka-Uber & apos kwiLyft & apos; s Amp
Karate API Testing Isixhobo Cheat Sheet